११३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३७ आयोजनालाई अनुमति,पढ्नुहोस् कुन–कुन ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > ११३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३७ आयोजनालाई अनुमति,पढ्नुहोस् कुन–कुन ?
११३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३७ आयोजनालाई अनुमति,पढ्नुहोस् कुन–कुन ?
काठमाडौ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म तीन हजार ६८४ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिएको छ । आव २०७३/७४ मा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाको क्षमता एक हजार १३६ मेगावाट रहेको छ ।
अनुमतिपत्र लिएका केही आयोजना निर्माणको चरणमा र कतिपयले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा रहेका विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल निजी क्षेत्रका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये १३५ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना आव २०७३/७४ मा सम्पन्न भएका थिए । चालु आवमा प्राधिकरणको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया निर्माण सम्पन्न हुने छ ।
निजी क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित करिब ३०० मेगावाट बराबरका आयोजना पनि सम्पन्न हुने छन् । तर हिउँदमा ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मात्रा न्यून रहने छ ।
सरकारको बास्केटमा हालसम्म १२८ आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता चार हजार २१ मेगावाट छ । सरकारले एक हजार २४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाएको छ भने सात हजार १३६ मेगावाट क्षमताका ५५ आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् ।रासस
२०७४ साउन ११ गते १४:२८ मा प्रकाशित
४ कम्पनीको ९८ लाख कित्ताभन्दा बढि सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
२ हजार ६ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुँदै
एनएमबि बैंकले लाभांश र १० वर्ष अघिको निक्षेप लैजान शेयरधनिलाई बोलायो
ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकलाई मर्जरको सैद्धान्तिक स्वीकृति